.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song ကနေ Video ပြောင်းချင်သူများအတွက်..
Flash Song ကနေ Video ပြောင်းချင်သူများအတွက်..
ကျွန်တော်တို့ Flash Song တွေကနေ Video ဖော်မက် ပြောင်းချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ဒီ Converter လေးက
အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြောင်းလို့ရတဲ့ Video ဖော်မက်ကလည်း တော်တော်လေးကို စုံပါတယ်။ ဟိုအရင်တုန်းက
ကျွန်တော် သုံးဖူးတဲ့ Converter တွေဆိုရင် Flash Song ကနေ Video ဖိုင် ပြောင်းပြီးရင် အသံတွေ မပါတော့တာတို့ ၊
သူ့ ဆော့ဝဲလ် Logo ကြီးတွေ ပါနေတာတွေရော နောက်ပြီး အရမ်းကို မှုန်ဝါးသွားတာပါပဲ။ ဒီ Converter လေးကတော့
အဲဒါတွေ အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ မူရင်း ဆော့ဝဲလ်က ရောင်းစားတာဆိုတော့ သူတို့က ဒီလိုကြီး လုပ်ထားတယ်ဗျ..
အဲဒါကို Full Version ဖြစ်အောင်လို့ ကျွန်တော် Patch ဖိုင်တွေ ၊ Crack ဖိုင်တွေ ကို Google မှာ တော်တော်လေးကို
ရှာယူလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး Activator လေးနဲ့မှ အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျာ..။ ခုတော့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
သုံးရတာ အဆင်ပြေ လွယ်ကူအောင် အနော် Full ဖြစ်ပြီး Portable လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကြည့်ပါ။
Flash Song တွေကနေ Video ဖိုင် ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
မူရင်းဆိုဒ် ဒီနေရာမှာ သွားဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ Trial Version ပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Full Portable ပါ။
Download: Xilisoft Video Converter Ultimate
Version: 7.7.2 build-20230619 [ Full Portable ]
Flash Song ကနေ Video ပြောင်းနည်း
နံပါတ် ၁ ကို နှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းမယ့် Flash Song တစ်ပုဒ်ကို ထည့်ပါ။
နံပါတ် ၂ ကို နှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Video ဖော်မက်ကို ရွေးပေးပါ။ ဥပမာ [General Video Format >> AVI ပေါ့ ]
နံပါတ် ၃ ကို နှိပ်ပြီး Convert လုပ်ပါ၊ ခဏဆို ကိုယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ Video ဖိုင်လေး ရပါပြီဗျာ..
ဒီပို့စ်လေးကို ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ Full Version လုပ်ဖို့
Portable လေးဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင် တော်တော်လေး အပင်ပန်းခံပြီး ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးထားတဲ့ စေတနာကို
အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ လင့်လေး ပြန်ညွှန်းပေးစေချင်တာပါ။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေလို့..။
Posted by Thurainlin at 21:52
Labels: Converter, Flash Song, Software